Ndị nchọpụta nke na-amụ dolphins apụghị ịjụ ha ajụjụ ma bụrụ ndị a manyere iji mụta banyere dolphins site na ịhụ omume ha. Ndị nchọpụta na-enyocha ụmụ mmadụ, n'aka nke ọzọ, na-eme ka ọ dịkwuo mfe: ndị nabatara ha nwere ike ikwu okwu. Igwa ndị mmadụ okwu bụ akụkụ dị mkpa nke nchọpụta mmekọrịta n'oge gara aga, ana m atụ anya na ọ ga-abụ n'ọdịnihu.
Na nyocha nke ndi mmadu, ikwurita okwu na ndi mmadu na-eme uzo abuo: nyocha na nyocha di omimi. N'ikwu okwu siri ike, nchọpụta na-eji nyocha na-agụnye nchịkọta usoro nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eso, ndị na-enyocha akwụkwọ ndị a haziri nke ọma, na iji usoro nchịkọta akụkọ iji mee ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu site na ndị so na ya baawanye. Nnyocha na iji nyochaa miri emi, n'aka nke ọzọ, n'ozuzu ha na-agụnye ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị so na ya, mkparịta ụka ndị a haziri ahazi, ma rụpụta ngosipụta bara uru nke ndị so na ya. Nnyocha na inyocha omumu dị omimi bụ ihe dị ike, ma nyocha ọ na-enwe mmetụta dị ukwuu site na ntụgharị site na analog ahụ na afọ dijitalụ. Ya mere, n'isiakwụkwọ a, m ga-elekwasị anya nyocha ọchụchọ.
Dị ka m ga-egosi na isi nke a, oge dijitalụ na-eme ọtụtụ ohere na-akpali akpali maka ndị nchọpụta nyocha iji nakọta data ọsọ ọsọ ma dị ọnụ ala, ịjụ ụdị ajụjụ dịgasị iche iche, na iji mee ka data nyochaa na nnukwu data data. Echiche nke na nnyocha nyocha nwere ike ịgbanwe site na mgbanwe nkà na ụzụ abụghị ihe ọhụrụ, Otú ọ dị. N'ihe dị ka afọ 1970, mgbanwe dị otú ahụ na-eme ka nkà na ụzụ dị iche iche na-arụ ọrụ: telifon. Ọ dị mma, ịghọta otú ekwentị gbanwere nchọpụta nyocha nwere ike inyere anyị aka iche n'echiche otú oge ịgbanarị ga-agbanwe nnyocha nyocha.
Nnyocha nyocha, dị ka anyị si mata ya taa, malitere na 1930s. N'ime oge mbụ nke nnyocha nyocha, ndị nchọpụta ga-atụle ebe ndị na-emepụta ala (dị ka ebe ndị obodo) na-aga ebe ndị ahụ ka ha nwee ike inwe mkparịta ụka ihu na ihu na ndị mmadụ na-enweghị atụ. Mgbe ahụ, mmepe nkà na ụzụ-mgbasa ozi zuru ezu nke ekwentị na mba ndị bara ọgaranya-mechara duga n'ọgbọ nke abụọ nke nchọpụta nnyocha. Oge nke oge a dị iche n'otú e si akọwa mmadụ na otú mkparịta ụka si mee. Na oge nke abụọ, kama ịchọta ezinụlọ na mpaghara ebe, ndị na-eme nchọpụta enweghị usoro nọmba ekwentị dị na usoro a na- akpọ ntinye ọnụ ọgụgụ . Kama ime njem iji gwa ndị mmadụ okwu ihu na ihu, ndị nchọpụta na-akpọ ha na telifon. Ndị a nwere ike iyi ka ọ bụ obere mgbanwe akwụkwọ, ma ha mere nnyocha nyocha ngwa ngwa, dị ọnụ ala, na ndị ọzọ mgbanwe. Na mgbakwunye na inye ike, mgbanwe ndị a na-arụ ụka n'ihi na ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta na-enwe nchegbu na usoro nyocha ndị a na nyochaa nwere ike ịmebata ọtụtụ mkparị. Ma n'ikpeazụ, mgbe ọtụtụ ọrụ gasịrị, ndị nchọpụta chọpụtara otú e si anakọta data nke nwere ike iji ntinye ọnụ ọgụgụ na ọnụọgụ ekwentị. Ya mere, site n'ichepụta otu esi eme nke ọma n'inweta akụrụngwa nke nkà na ụzụ nke ndị mmadụ, ndị nchọpụta nwere ike ime ka ha mara na ha mere nyocha.
Ugbu a, mmepe nkà na ụzụ ọzọ-afọ ole na ole-ga - emesị mee ka anyị rute n'oge nke atọ nke nchọpụta nyocha. A na-emegharị mgbanwe a n'akụkụ ụfọdụ site na mmebi nke nwayọọ nke oge nke abụọ (BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Dịka ọmụmaatụ, n'ihi ọtụtụ ihe ndị dị na nkà na ụzụ na nke ọha na eze, ọnụ ọgụgụ ndị na-adịghị akwụ ụgwọ-ya bụ, ọnụ ọgụgụ nke ndị nwere ọgụgụ isi na-adịghị etinye aka na nyocha - anọwo na-amụba ruo ọtụtụ afọ (National Research Council 2013) . Ihe ndị a dị ogologo oge na-egosi na ọnụego ndị na-adịghị akwụ ụgwọ pụrụ ugbu a karịa 90% na nyocha ekwentị (Kohut et al. 2012) .
N'aka nke ọzọ, ọ bụ site na ohere ọhụụ na-akpali akpali, ụfọdụ n'ime ihe m ga-akọwa na isi nke a, na-agafe n'oge nke atọ. Ọ bụ ezie na ihe edozibeghị, ana m atụ anya na oge nke atọ nke nchọpụta nnyocha a ga-ejupụta na ntinyeghị ihe omume, nyochaa na kọmputa, na njikọ nke nyocha na nnukwu data data (okpokoro 3.1).
Isiokwu nke 3.1: Ihe atọ nke nnyocha nyocha nke dabeere na Groves (2011)
Oge mbu Ebe nlele nke puru omume Ihu na ihu Nyocha nyocha-naanị ya
Oge nke abụọ Ịkpọ oku na-ehichapụ anya (RDD) ihe gbasara nke puru omume Ekwentị Nyocha nyocha-naanị ya
Oge nke atọ Ntinye akaghi oke Ejiri Kọmputa Nnyocha ndị e jikọtara na isi mmalite data
Mgbanwe dị n'agbata nke abụọ na nke atọ nke nchọpụta nyocha emebeghị ka ọ dị mma, na enwere arụmụka arụmụka banyere otú ndị nnyocha ga-esi gaa n'ihu. N'ileghachi anya azụ na mgbanwe dị n'etiti nke mbụ na nke abụọ, echere m na enwere otu nghọta dị mkpa maka anyị ugbu a: mmalite abụghị njedebe . Nke ahụ bụ, na mbụ ọtụtụ usoro nke ekwentị ndị ọzọ nke oge abụọ bụ ad hoc na arụghị ọrụ nke ọma. Ma, site n'ịrụsi ọrụ ike, ndị nchọpụta edozi nsogbu ndị a. Dịka ọmụmaatụ, ndị nchọpụta nọ na-edegharị aha ọtụtụ afọ tupu Warren Mitofsky na Joseph Waksberg mepụtara usoro ntinye akara ntinye nke nwere ezigbo ihe bara uru (Waksberg 1978; ??? ) . Ya mere, anyi agaghi echeghari oge nke oge nke ato na-abia na ihe kachasi ha.
Akụkọ ihe mere eme nyocha na-egosi na ubi ahụ na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe site na mgbanwe na nkà na ụzụ na ọha mmadụ. Enweghị ụzọ isi kwụsị evolushọn ahụ. Kama nke ahụ, anyị kwesịrị ịnakwere ya, ebe anyị na-aga n'ihu na-enweta amamihe site na mbụ, na nke ahụ bụ ihe m ga-ewere na nke a. Akpa, m ga-arụ ụka na nnukwu ihe ọmụma data agaghị edochi nyocha na na ụba nke nnukwu data data na-abawanye-ọ bụghị ebelata-uru nke nyocha (nkebi nke 3.2). Nyere mkpali ahụ, m ga-achikota usoro mkpechapụ nyochaa (ngalaba nke 3.3) nke mepụtara n'oge mbụ nke abụọ nke nchọpụta nnyocha. Usoro a na-enyere anyị aka ịghọta usoro ọhụụ ọhụrụ na-anọchite anya-karịsịa, ihe atụ na-enweghị ihe omume (nkebi nke 3.4) - na ụzọ ọhụrụ iji mesie ihe-karịsịa, ụzọ ọhụrụ nke ịjụ ajụjụ nye ndị zara (nkebi nke 3.5). N'ikpeazụ, m ga-akọwa ihe ndebiri nchọpụta abụọ iji jikọọ data nchọpụta gaa na nnukwu isi mmalite data (ngalaba 3.6).